Zendaya ee 2021
(1996-09-01) Sebteembar 1, 1996 ( 25jir)
Zendaya Maree Stoermer Coleman (/ˈdeɪ.ə/ zən-DAY-ə; Septeembar 1, 1996) waa jilaa Mareykan ah iyo heesaa. Waxay heshay abaal-marinno kala duwan oo ay ka mid yihiin Abaalmarinta Primetime Emmy, Abaalmarinta Satelite, iyo Abaalmarinta Saturn.
Zendaya Maree Stoermer Coleman waxa ay dhalatay Sebtembar 1, 1996, Oakland, California, waxaana u dhashay macalimiin Claire Stoermer iyo Kazembe Ajamu Coleman. Aabaheed waa Afrikaan-Maraykan; hooyadeed waxay leedahay abtirsiinyo Jarmal iyo Iskotish ah. Zendaya waxay leedahay shan walaalo oo ka weyn. Waxay dhigatay Dugsiga Hoose Fruitvale, halkaasoo hooyadeed wax ku baranaysay labaatan sano. Markii ay da'da lix jir ahayd, iyada iyo laba saaxiibo ah oo dugsiga ka tirsan ayaa halkaa ku soo bandhigay riwaayad loogu talagalay Bisha Taariikhda Madoow. Zendaya sidoo kale waxay dhigatay Dugsiga Farshaxanka Oakland.
Zendaya waxay shaqadeeda bilawday iyadoo ah moodel caruureed iyo qoob ka ciyaar. Doorkeeda Rocky Blue ee sitcom-ka Disney Channel Shake It Up (2010–2013) waxay heshay caannimadeeda. 2013-kiina, waxay ahayd tartame lix iyo tobnaad ee taxanaha tartanka qoob ka ciyaarka Dancing with the Stars. Doorkeeda halganka, kurayda balwada leh ee taxanaha HBO Euphoria (2019–hada) ka dhigay Zendaya qofka ugu da'da yar ee helay Abaalmarinta Primetime Emmy. Aflaanteeda doorarkeeda waxaa ka mid ah The Greatest Showman (2017), Spider-Man: Homecoming (2017), Smallfoot (2018), Malcolm & Marie (2021), Space Jam: A New Legacy (2021), iyo Dune (2021).
Marka laga soo tago xirfadeeda jilitaanka, Zendaya waxay ku dhiiratay muusikada. Sannadkii 2011, waxay sii daysay heesaha "Swag It Out" iyo "Watch Me", kan dambe ee iskaashiga Bella Thorne. Waxay la saxeexatay Hollywood Records ee 2012 ka dibna waxay sii daysay heesteedii ugu horeysay, "Replay".
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named usmag
↑ As pronounced by Zendaya in the following:
Template:Cite AV mediaTemplate:Cbignore
↑ Phares, Heather. AllMusic https://web.archive.org/web/20161001232427/http://www.allmusic.com/artist/zendaya-mn0002732005/biography. Waxaa laga kaydiyay the original October 1, 2016. Soo qaatay June 8, 2016. Barameter aan la aqoon |url-status= ignored (caawin); Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Zendaya Gets to the Heart of Her Family Tree for Immigrant Heritage Month".
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Zendaya&oldid=230365"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Febraayo 2022, marka ee eheed 18:28.